Njikwa Nchọgharị Nchọgharị: Ọ Dị Mfe Ka Ọ Bụ Nsogbu? | Martech Zone
Monday, March 30, 2009 Satọde, 16 Juun 2018 Douglas Karr
Enwere ọtụtụ ozi dị na weebụ otu esi eme ka saịtị weebụ kachasị na ntanetị. O di nwute, 99.9% nke weebụsaịtị ka enweghi njikarị ọ bụla. Anaghị m ekewapụta onwe m dị ka SEO ọkachamara, ezie m kwere na m nwere a nghọta zuru oke nke ihe ndị dị na ya etinye aka na 'ịpịpụta kapeeti na-acha uhie uhie' maka engines ọchụchọ.
Mgbe ndị enyi m jụrụ m maka ndụmọdụ, m na-enye ha ihe ndị bụ isi:
Debanye aha gị na saịtị Njikwa Nchọta Google iji hụ na edepụtara ya na ọ nweghị nsogbu. Nke a ga-egosi nkwalite ị kwesịrị ime - dị ka iji saịtịmaps na faịlụ robots.
Research mkpụrụokwu mkpirisi na ndị nyocha na-eji achọ ngwaahịa na ọrụ ị nyere. Otu ihe atụ bụ enyi na-elekọta ụlọ ọrụ ozi ederede… mana enweghị okwu ahụ ahịa efu na ọdịnaya saịtị ya. Nke a abụghị ihe ọzọ - ọ mara mma!
Ghọta ebe-eji ahu nagide Keywords… si ngalaba aha, URL or slug, aha peeji, h1 mkpado, isiokwu nta, ederede nwere obi ike, wdg yana ịhụ na ejiri mkpụrụ okwu ọtụtụ oge n'ime ọdịnaya.
Ghọta na ike isiokwu-ọgaranya njikọ azụ gị na saịtị ga n'ụzọ dị ịrịba ama dịkwuo ogo nke gị na saịtị ahụ maka ndị Keywords. Nnukwu usoro backlink nwere ike ịdị na-ekere òkè na mkparịta ụka na ikwu okwu na blọọgụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Ikekwe ihe kachasị mkpa bụ naanị ide ederede dị ukwuu ma dee ya nke ọma. Gaghị enwe ike merie raffle ma ọ bụrụ na ịzụtaghị tiketi. Otu ihe a na - aga na igwe nyocha - ị nweghị ike ịkwado maka nsonaazụ ọchụchọ ma ọ bụrụ na ịnweghị ọdịnaya ọ bụla metụtara nyocha ahụ. Zụrụ tiketi ndị ọzọ na ohere ị nwere ịchọta dị ukwuu. Mgbakọ na mwepụ ahụ dị mfe.
Industriesfọdụ ụlọ ọrụ na Keywords dị asọmpi na ya chọrọ otutu ulo oru mbo - na nka, oge, ọdịnaya na azumazu azu. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmị omimi miri emi, aga m akwado isonye Moz. Ma ọ dịkarịa ala, gụọ nke Moz Ihe Nchọpụta Njin Nchọgharị ịghọta n'ụzọ zuru ezu mmetụta dị mfe peeji ihe nwere ike inwe na ogo ọchụchọ engine gị. E nwere ihe ndị ọzọ Edemede SEO ebe ahụ!
Mar 31, 2009 na 12: 21 AM
Ndụmọdụ siri ike. Achọpụtara m SEO na-agbagwoju anya ma ọ na-akpasu m iwe n'ihi na amaara m na ọ dị mkpa. M ji nwayọ na-amụta ma na-akawanye mma na ya. Mana otu ihe m chọtara bụ na agbanyeghị na amaara m na SEO m niile nwere ike ọ dị mma naanị iwepụta ọdịnaya na-enyere aka.
Dee ugboro na iji Keywords gi. Ọ ga-ewe oge mana ọ dị ukwuu maka google.
Apr 1, 2009 na 2: 56 AM
Echere m na ị kpuchiela isi okwu niile dị mkpa ịtụle na SEO. E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na ndị ọkachamara SEO ka enweghị echiche banyere isiokwu a. M na-atụ aro iji google adwords mpụga isiokwu ngwá ọrụ na-ahọpụta isiokwu kwesịrị ekwesị.
Seo dị mgbagwoju anya, agbanyeghị na saịtị gị ziri ezi ma ị na-eche mgbe niile gbasara mkpa, ọ na-arụ ọrụ n'ezie. Ọ dịkwa mkpa ịhụ (thru stats ma ọ bụ google wemaster ngwaọrụ) okwu ndị mmadụ na - achọ n'ezie. Ọ na-eju m anya na okwu ụfọdụ ndị mmadụ na-etinye na nyocha ha.
Ikiri nyocha ka wepu ma kpochapu ihe ndi n’eme ka ndi mmadu bia gi na saiti ndi n’achoghi ka odi uzo di nma iji bawanye mkpa gi…
Itinye echiche gị na blọọgụ dị ka nke a bụ ụzọ dị mma!
Jun 28, 2011 na 7: 33 PM
Ọ B IFR you na ị juo nke a n'ihu, m ga-eji ọlyụ zaa ya ee mana ugbu a ọ bụghị n'ihi ọtụtụ ngwaọrụ google na-enyocha njikọ ọ bụla nke weebụsaịtị a nwere ike ịchọta na nyocha ọchụchọ yana kwa maka mmelite nke google. SEO siri ike n'oge a nke na - eme ka ndị ọkachamara SEO bụrụ ndị na - agbasa ozi na aghụghọ, nke ahụ bụkwa ezigbo mmetụta.